Apple Watch wuxuu ka baqayaa saacadda dahabka ee Huawei | Wararka IPhone
Huawei ayaa bilaabi doonta saacad dahabi ah, tartan loogu talagalay Apple Watch?
Waa wax lala yaabo sida xiisaha leh ee suuqa smartwatch-ka uu u helayay bilihii la soo dhaafay. Markii la bilaabay Apple Watch, qaar badan oo ka mid ah shirkadaha waawayn ee teknolojiyadda ee suuqa waxay umuuqdaan kuwo dhigay baytariyada inay abuuraan smartwatch u dhiganta oo ku saabsan Android, iyadoo shirkadaha sida Huawei aad u xoogan yihiin.
Waagii hore Shirweynaha Dunida Wareega ee Barcelona Waxaan arki karnay waxa ay noqon laheyd sharaddiisa weyn inuu la ciyaaro halyeeyada ku jira suuqa dharka xiran, oo leh saacad soo jiidasho leh oo la fiiriyo iyo qalab aad u guuleysta iyo dhammeystir. Maaddaama ay u muuqato inay tahay isbeddelka smartwatches ee loogu talagalay Android, waxay sidoo kale leedahay wareeg wareeg ah (sida kan keenaya kan xiga Galaxy Gear 2).
Iyadoo la soo bandhigayo bandhig rasmi ah oo loo qorsheeyay Sebtember 2, xayeysiin hadda lagala noqday Amazon ayaa durba na tusisay moodooyinka kala duwan ee smartwatch-ka shirkadda Aasiya, taas oo mahad leh taas oo aan awoodnay inaan ogaano inay diyaarinayaan moodal dahabi ah oo dahabi ah. The Apple Edition Si guul leh ayey ugu guuleysatay suuqa Aasiya, marka Huawei waa inuu u maleeyay inaysan waligeed fikrad xun ahayn in saacad yar "gaar ah" laga dhigo.
Qiimaha saacadani dahabka ah ayaa qiyaastii ahaan lahayd $ 800, farqi la taaban karo oo la barbar dhigo Apple Watch haddii aan xisaabta ku darsanno in kharashka dambe inta udhaxeysa 11.000 ilaa 18.000 euro. Haddii xanta la xaqiijiyo in Android Wear ee loo yaqaan 'iOS Wear for iOS' la heli karo sida ugu dhakhsaha badan inta aan u malayno (sidaan kuu sheegnay) Halkan), Waxay noqon kartaa tartame biraha Apple Watch, oo qiimahoodu aad u kici lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Huawei ayaa bilaabi doonta saacad dahabi ah, tartan loogu talagalay Apple Watch?
Qiimaha iPhone 6 ma hoos ayuu u dhici doonaa marka iPhone 6s soo baxo?
Sida loo tirtiro kombiyuutar aad ku kalsoon tahay iPhone ama iPad